Uyenza njani i-imeyile yokuThengisa ngeFowuni ngobuhlobo | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 14, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Itempile yaseLavon
"Ngonyaka, ngaphezulu kuka-Matshi 2011 ukuya ku-Matshi 2012, i-imeyile ivula kwizixhobo eziphathwayo zikhule ngeepesenti ezingama-82.4," ngokwe-Return Path mobile statistics. Ukwenza inxenye yeselfowuni kwimizamo yakho yokuthengisa nge-imeyile akusekho kwimikhankaso ye-imeyile ephambili; yimfuneko.
Kutshanje, iDelivra ipapashe indlela yokwenza i-imeyile yakho yokuThengisa iselfowni ngobuhlobo, isibonelelo esibonelela ngeendlela ezihambahambayo zika-2012, izibalo, kunye neengcebiso malunga nendlela yokwenza ukuba ukuthengisa kwakho nge-imeyile kulungele abaphulaphuli bakho ekuhambeni.
Iphepha elimhlophe lixoxa ngezinto ezintathu ezibalulekileyo kwimpumelelo ye-imeyile ephathekayo kunye neendlela ezifunekayo ukusebenzisa eso sicwangciso.
Baphi abaphulaphuli bakho abafunda i-imeyile?
Ngaba uyila umxholo wabafundi beselfowuni?
Ngaba uyilo lwakho lwe-imeyile luhamba lula?
Ngempendulo yale mibuzo kunye nokuqinisekisa ukuba ii-imeyile zakho ziza kubudala obuhambayo, khuphela iNkqubo yokwenza i-imeyile yakho yokuThengisa iMfono mfono mhlophe.
Ama-80% abathengi bafumana ukufunda ukuthengisa ii-imeyile kwiselfowuni yabo ngokulula kangako kune-PC. Ngaba uyayila ii-imeyile ukuba abaphulaphuli bakho bakwazi ukuzifunda ngokulula kwaye baphendule kwifowuni? Ukuba akunjalo, kunokwenzeka ukuba uhanjiswe kudoti. Ungakuvumeli oko kwenzeke!
tags: delivraemail MarketingUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiimeyile ephathekayoiintsingiselo mobile
Meyi 16, 2012 kwi-5: 39 PM
Enkosi ngokupapasha oku. Besithetha nje nomthengi namhlanje malunga nokubaluleka kweselfowuni kwaye kubaluleke kangakanani ukuba siyisebenzise ngeli thuba ikwi-curve yokukhula engakholelekiyo!